United oo diirada saareysa heshiiska xidiga reer England ee ciyaaryahan Sancho Horyaalka Ingiriiska
Juventus oo xaqiijisay in Rodrigo Bentancur laga helay Carona Veris.
Barcelona oo soo saartay safka ay kaga hortegeyso Asosuna Kulanka Habeen dambe.
Home Horyaalka Ingiriiska United oo diirada saareysa heshiiska xidiga reer England ee ciyaaryahan Sancho
United oo diirada saareysa heshiiska xidiga reer England ee ciyaaryahan Sancho
Red Devils ayaa sii wada baacsiga ay ugu jirto xiddiga reer England
Manchester United ayaa weli waxay ku howlan tahay sida ay ula soo wareegi laheed Jadon Sancho, wargeyska 90min ayaa lagu daabacay in ay kooxda United dooneyso milkiyada xidiga ka hor inta oo furimin suuqa kala iibsiga Qaarada Yurub ee bisha Janaayo.
Qiimaha xigaha ay ku rabto kooxda Dortmund ayaa ah mid qaali ah oo kooxdii dooneyso laacibka ku qasban tahay in ay bixiso, Man United ayaa ah kooxda kaliya ee kusoo hartay tartanka loogu jiray Sancho.
Labada koox ayaa gaaray heshiis hordhac ah ee ku aadan qiimaha laacibka, kooxda reer Jarmal Dortmund ayaa ka faa,iideysanee baahida weyn ay Man United u qabto laacibkooda.
Previous articleXidig muhiim u ah kooxda Liverpool oo looga gacan haatinaa horyaalka Itaaliya
Next articleBen Chilwell oo rajo weyn galiyey Taageeryaasha Chelsea kadib dhaawacii soo Gaadhay
Barcelona oo soo saartay safka ay kaga hortegeyso Asosuna Kulanka Habeen...
Wararka Ciyaaraha Maanta1921